मलाई राती असाध्यै पिसाब लाग्छ के कारणले होला? समाधानको उपाय?
असार २९, २०७४ बिहिवार १७:०६:०० प्रकाशित
मलाई राती असाध्यै पिसाब लाग्छ के कारणले होला? समाधानको उपाय?- बि.एस‍.
सामान्यतयाः निरोगी र वयस्क व्यक्तिले चौबीस घण्टामा कूल पिसाबको २० प्रतिशत मात्र सुतेको बेला उत्पादन गर्छ । तर वृद्धावस्थामा भने चौबीस घण्टाको पिसाबको ३३ प्रतिशत सुतेको समयमा उत्पादन हुन्छ । यो सामान्य मात्राभन्दा बढी पिसाव उत्पादन हुनुलाई रात्रि मूत्रश्राव रोग भनिन्छ । सुतेर उठेको पहिलो पिसाबलाई पनि रात्रिकालीन पिसाब मान्नुपर्छ।
बिभिन्न अध्ययनले कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत भन्दा बढि मानिसमा रात्रि मूत्रश्रावको समस्या हुनसक्ने देखाएको छ । कम उमेरका भन्दा बढी उमेरका व्यक्तिलाई राति उठेर पिसाब फेर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । यो समस्याले मानिसको जीवनको गुणस्तर, जीवनशैली, जीवन ऊर्जा तथा जीवनका विभिन्न पक्षमा सोझै असर पार्नसक्छ ।
रात्रि मूत्रश्राव हुनुका पछाडि थुप्रै कारण छन् । तर कारण सबै व्यक्तिमा समान हुंदैन । अनिदो, सुत्नुअघि धेरै तरल पदार्थ पिउने, मूत्रथैलीको भण्डार गर्ने क्षमतामा कमी, कहिलेकाहिँ कलेजो बिग्रेमा, पुरुषमा प्रोष्टेट ग्रन्थीको वृद्धि भएमा वा सुकेमा, मूत्रथैलीको पिसाब सञ्चय गर्ने क्षमतामा कमी आएमा, मूत्रथैली वा पिसाबको संक्रमण भएमा वा मधुमेहका कारणले पनि यो रोग लाग्छ।
यसबाहेक कलेजो वा मिर्गौला रोगको कारणले जीउमा सुजन हुनु, पिसाब फेरेपछि पूरा मात्रामा मूत्रत्याग नभएर थैलीमा पिसाबको मात्रा बाँकी हुनु, मासिक समस्या र धेरै पिसाब बन्ने रोग र केही पिसाब धेरै बनाउने औषधी सेवनका कारण पनि यो समस्या देखिन्छ । । तर यसबाहेक अरु थुप्रै कारणले पनि यो समस्या हुनसक्छ।
बिभिन्न अध्ययनले एकपल्ट रात्रि मूत्रत्याग गर्ने बानीलाई धेरैले सहजरुपमा लिने गरेको देखाएको छ । यदि दुई वा तीन पल्ट पिसाव फेर्न उठ्नुपरे चाहिँ यो नराम्रो समस्याका रूपमा प्रस्तुत हुन्छ । तीन पल्टभन्दा बढी उठ्नुपर्दा सबैजसो यो अवस्थालाई निराशापूर्ण रुपमा लिएर उपचारको खोजीमा भौँतारिने गर्छन् । सर्वप्रथम रात्रिको मूत्रत्यागले निद्रामा ज्यादै नराम्रो असर पार्ने हुँदा यो नै सबैको चासोको विषय हुनपुग्छ । तर यससँगै अनिद्रा आफैमा रात्रि मूत्रश्रावको कारण हुन सक्छ भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन ।
पिसाब थैली तथा प्रोस्टेटको क्यान्सर भएको अवस्थामा पनि रात्रि मूत्रत्याग बढी हुनसक्ने भएकाले पिसाबमा रगत गए नगएको ध्यान दिनुपर्छ । खास गरेर धूमपान गर्नेहरुले यो कुरामा ज्यादै चनाखो हुनु जरुरी छ । त्यसकारण रातीमा धेरै पिसाब आउनुका थुप्रै कारण भएकाले चिकित्सककहाँ जचाउनु नै सबैभन्दा उत्तम हुन्छ।
- डा. अर्जुनदेव भट्ट, वरिष्ठ युरोलोजिष्ट
पिसाब रोक्दा हुने ७ समस्या
४. डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल, जुनसुकै बेला मुटु बन्द हुन सक्ने खतरा